Banyere Anyị | HEBEI XINTELI CO., LTD
Hebei Xinteli bụ ụlọ ọrụ na-eto eto pụrụ iche na mbubata na mbupụ, wee nweta ya site na nhazigharị nhazi nke ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ọzọ nke steeti nwere. .The ngwaahịa nso nke Hebei Xinteli bụ waya ntupu ( hexagonal waya ntupu, welded waya ntupu), metal fencing (ubi nsu, Holland nsu), ubi ngwaahịa, ígwè ngwaahịa na ngwaike ngwaahịa.We na-eji elu àgwà ihe dị ka obere carbon steel.Xinteli nwere ike inye ọtụtụ ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche. Ha bụ galvanized, PVC kpuchie, galvanized na PVC mkpuchi. A ga-enyocha ngwa ahịa nke ọma tupu nnyefe, iji nye ndị ahịa anyị mma.
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe na ọrụ ugbo, nchekwa anụmanụ, ubi wdg. Azụmahịa anyị na-ekpuchikwa mbubata na mbupụ nke ọtụtụ ụdị ngwaahịa na usoro dị iche iche.Anyị na-abanye n'ime ndị na-ebupụ ihe kacha elu na Hebei Province maka ngwaahịa ọla & ubi.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Hebei Xinteli nọ na-elekwasị anya na nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ.Site na arụmọrụ ọhụrụ, a na-abawanye oke ngwaahịa anyị mgbe niile.A na-ewusikwa netwọk ahịa anyị ike nke ukwuu.A na-ere ngwaahịa anyị ugbu a nke ọma n'ahịa zuru ụwa ọnụ karịsịa na Europe, United States of America, North America, Africa- etc. The ugbu a azụmahịa nke Hebei Xinteli na-emepe emepe na otu ebe nzọụkwụ.
Hebei Xinteli nwere ọmarịcha otu ndị na-ahụ maka nrọ, juputara na ebumnuche, ike na imepụta ihe.Anyị kwenyere na, na nkwonkwo mgbalị niile òtù, Hebei Xinteli ga-aghọ flagship enterprise na Hebei mba ọzọ ahia ahia.
Hebei Xinteli nwere ọmarịcha otu ndị na-ahụ maka nrọ, juputara na ebumnuche, ike na imepụta ihe.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hebei Xinteli Co., Ltd.